रजनीकान्त : बस कण्डक्टरदेखि सुपरस्टारसम्म, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
रजनीकान्त : बस कण्डक्टरदेखि सुपरस्टारसम्म
मुम्बई। दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकान्तले केही दिन अगाडि आफू राजनीतिमा आउने घोषणा गरे। फिल्म करियरपछि खब ६७ वर्षका रजनीकान्तले नयाँ पार्टीसँगै आफ्नो राजनीतिक करियर सुरु गर्नेछन्। २०२१ मा हुने तमिलनाडू विधानसभा चुनावमा रजनीकान्त पनि मैदानमा हुनेछन्।
तर, रजनीकान्तले आफ्नो करियरको सुरुवात बस कण्डक्टरका रुपमा सुरु गरेका थिए। त्यही क्रममा उनलाई फिल्मको अफर आएको थियो। र संघर्ष गर्दै जाँदा आज उनी सुपरस्टार बन्न सफल भए। आज हामी तपाइँलाई रजनीकान्तको निजी र व्यवासायिक जीवनसँग जोडिएका केही रमाइला विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौं।
१२ डिसेम्बर १९५० मा बेंगलुरुको एक मराठी परिवारमा जन्मिएका रजनीकान्त मध्यमवर्गीय परिवारका थिए। रजनीकान्तको वास्तविक नाम शिवाजी राव गायकवाड हो। जीजाबाई र रामोजी रावका चार सन्तानमध्ये रजनीकान्त सबैभन्दा कान्छा सदस्य हुन्। उनको स्कुलको पढाइ पनि बेंगलुरुमा भएको थियो।
मात्र चार वर्षको उमेरमा रजनीकान्तले आफ्नी आमा गुमाउनु पर्यो। घरको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन। त्यसै कारण सबै प्रकारका काम गरे। रजनीकान्तले कुल्लीदेखि बस कण्डक्टरसम्मको काम गरे। बसका टिकट काट्ने अनौठो तरिकाका कारण उनी ड्राइभर र कण्डक्टरबीच निकै लोकप्रिय थिए।
हिरो बन्ने सपना पूरा गर्न रजनीकान्तका साथी राजबहादुरले धेरै सहयोग गरे। राजबहादुरले नै राजनीकान्तलाई मद्रास फिल्म उद्योगमा जान प्रेरित गरेका थिए। रजनीकान्तकालागि हिरो बन्नु सजिलो कुरा थिएन। उनलाई अन्य साथीहरुले पनि सहयोग गरे। जो उनीजस्तै बसका कण्डक्टर थिए। अभियन सिक्नेक्रममा उनले तमिल भाषा पनि सिके।
योबीचमा रजनीकान्तको भेट फिल्म निर्देशक के. बालचन्द्रसँग भयो। उनैले रजनीकान्तलाई फिल्म ‘अपूर्वा रागनगाल’ मा मौका दिए। सो फिल्ममा कमल हसन र श्रीविद्या पनि थिइन्। यद्यपी सो फिल्ममा रजनीकान्तको सानो र नेगेटिभ रोल थियो। त्यसपछि पनि दुई तीन वर्षसम्म उनले यस्तै प्रकारका भूमिका निर्वाह गरे।
नेगेटिभ भूमिका निर्वाह गरेपछि रजनीकान्त पहिलो पटक आफ्नो भिलेनको इमेजलाई तोड्दै फिल्म ‘भुवन ओरु केल्विकुरी’ मा हिरोको रुपमा देखिए। मुथुरमम र रजनीकान्तको जोडीलाई दर्शकले खुब मन पराए। र उनीहरुले करिव २५ वटा फिल्मका काम गरे।
रजनीकान्तको फिल्म ‘बिल्ला’ बक्स अफिसमा निकै सफल भयो। जुन फिल्म १९७८ मा रिलीज भएको अमिताभ बच्चनको फिल्म ‘डन’ को रिमेक थियो। पहिलो पटक रजनीकान्तलाई ‘मंदरु मूगल’ लाई तमिलनाडू सरकारले १८८२ मा बेस्ट एक्टरको अवार्ड दिएको थियो।
फिल्म ‘बाशा’ बाट रजनीकान्त सुपरस्टार बन्न सफल भए। जुन फिल्म १९९५ मा रिलीज भएको थियो। यो फिल्मले बक्स अफिमा कयौं रेकर्ड तोड्न सफल भयो। उता तमिल फिल्मले रजनीकान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्टेजसम्म पुर्यायो। रजनीकान्तको ‘मुथू’ जापानमा रिलीज हुने पहिलो तमिल फिल्म थियो। त्यसपछि २०१७ मा रजनीकानतको ‘चन्द्रमुखी’ टर्की र जर्मनीमा रिलीज भयो। शिवाजी रजनीकान्तको पहिलो फिल्म थियो जुन बेलायत र दक्षिण अफ्रीकाको बक्स अफीसमा टपमा थियो।
रजनीकान्तले आफ्नो फिल्मी करियरको दश वर्षमा १०० फिल्म पूरा गरेका थिए। उनले आफ्नो १०० औं फिल्म ‘श्री राधवेन्द्र’ मा हिन्दू सन्त राघवेन्द्र स्वामीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। जसबाट उनी झनै लोकप्रिय भएका थिए। रजनीकान्तले पहिलो पटक तमिल फिल्ममा एनिमेशनको प्रयोग गरेका थिए। ‘राजा चायना रोजा’ पहिलो फिल्म थियो जसमा एनिमेशन प्रयोग गरिएको थियो।